Izindaba - Izinzuzo Camping
Ukukhempa kunenombolo enkulu yezinzuzo zawo wonke umuntu omdala nomncane ongazijabulela wena nomndeni wakho ngenkathi nichitha isikhathi ningaphandle okuhle:
1. Ukunciphisa ingcindezi:Shiya ishejuli ebhukhiwe ngokweqile ekhaya.Uma ukhempa, ayikho indawo ongaba kuyo ngesikhathi esithile, futhi akukho lutho olukuphazamisayo noma oluqhudelana nokunakwa kwakho.Umphumela wemvelo walolu hlobo lwesilungiselelo ukunciphisa ingcindezi nokuphumula njengokuthi awukwazi ukukuthola kwenye indawo.
2.Umoya omusha:Ungase ungaboni ukuthi umoya ohlanzekile uyindlala kangakanani ekuphileni kwakho kwansuku zonke.Uma uya ekamu, uthola iphunga elimangalisayo langaphandle, kanye nephunga lokupheka kwesidlo sakusihlwa emlilweni ovulekile.
3.Ukwakha ubudlelwano:Esinye sezici ezinhle kakhulu nezibaluleke kakhulu zokukhempa yindlela ekusiza ngayo ukwakha nokuqinisa ubudlelwano.Uma uyokhempa nabangani noma nomndeni, uthola ithuba lokuxoxa nokuvakasha ngaphandle kokuphazamiseka, ngisho nasebusuku kakhulu.
4.Ukufaneleka komzimba:Isikhathi esichithwe ukhempa yisikhathi somzimba.Nimisa itende, nitheza izinkuni, nihambe niyoqwala.Ekhaya, sivame ukuphila impilo yokungawukhuthazi umzimba.Uma usekhempini, awukwazi ukuzibamba kodwa uzibandakanye nokuzivocavoca umzimba futhi wenze ukushaya kwenhliziyo yakho kukhuphuke.
5.Ukuntuleka kwamawashi:Ugcine nini ukulala ebusuku kakhulu ngaphandle kwewashi le-alamu ukuze likuvuse?Uma ukhempile, amawashi okuhlaba umkhosi okuwukuphela kwawo yilanga nokutshiyoza kwezinyoni.Ukuvuka nemvelo kunewashi le-alamu kuyinto okufanele wonke umuntu abe nayo njalo.
6.Ukukhipha i-plug:Ukukhempa kuyithuba elihle lawo wonke umuntu ukuthi akhiphe futhi abalekele izikrini zabo.Ngaphandle okuhle, awutholi amakhompyutha, amathebulethi noma omabonakude futhi kuningi ongakwenza okungadingi izinto zikagesi.
7.Ukudla okuhle:Ukudla kunambitheka kangcono uma kulungiselelwa ngaphandle.Kukhona okuthile mayelana nokupheka ukudla emlilweni, i-grill ye-campsite noma ekhishini le-Deluxe Cabin elingakwazi ukuphindaphinda uma udla ekhaya.Ngaphezu kwalokho, akukho okwedlula okwenziwe phezu komlilo ovulekile.Ziphuphe futhi uhlele imenyu enhle ngaphambi kokuthi uphume ohambweni lwakho olulandelayo lokukhempa.
8.Ukuxhumana nemvelo:Uma ukhempa, uthola ithuba lokuxhumana nemvelo, uhlangane nezilwane zasendle futhi ubone izinkanyezi kude nezibani ezikhanyayo zedolobha elikhulu.Ayikho into efana nayo.Qiniseka ukuthi wena nomndeni wakho ninethuba lokuxhumana nemvelo lapho nihlola izinzuzo eziningi zokukhempa.
9. Ukuthuthukiswa kwamakhono amasha:Awukwazi ukusiza kodwa ukuthuthukisa amakhono amasha ngenkathi ukhempa.Wonke umuntu ohambweni uzonikela futhi kuyithuba elihle lokufunda izinto ezintsha.Ungase ufunde ukumisa amatende, ukubopha amafindo, ukuqala imililo, ukupheka ukudla okusha nokunye.Lawa makhono abalulekile ukuba nawo, kodwa nokho asivamile ukuthola ithuba lokuwathuthukisa phakathi nezinhlelo zethu ezivamile ezimatasa.
10. Amathuba emfundo:Ezinganeni, isikhathi esichithwe ukukhempa isikhathi esichithwa ekufundeni, okungesinye sezizathu ezenza izinhlelo zokuhlola zibaluleke kangaka.Basiza okuhlangenwe nakho kokukhempa okwakhiwa eduze kwezingane ezifunda izinto ezintsha, okuhlanganisa ukudoba, ukupheka, ukuhamba ngezinyawo, ukubopha amafindo, ukuqala umlilo, ukuphepha, usizo lokuqala nokunye okuningi.
11. Ukukhula ukuzethemba:Kubalulekile ukuthi izingane kancane kancane zizimele futhi zizethembe ngamakhono azo.Enye yezinzuzo zokukhempa entsheni ukuthi ivumela ukuthi ifunde ukuzimela endaweni ephephile nelawulwayo.Izingane ziba nokuzethemba okwengeziwe njengoba zifunda izinto ezintsha futhi ziba nokuhlangenwe nakho kokuqala.
12. Ukuxhumana komndeni:Ukukhempa kuyinzuzo ezinganeni nasemindenini yazo ngoba kungasiza ekuqiniseni izibopho phakathi kwamalungu omndeni - abafowethu nodadewethu, abazali nezingane futhi uhlu luyaqhubeka.Nonke nizobuyela ekhaya nizizwa ninamandla njengeqembu.